Penguins, Pandas nedzimwe mhuka dzesango zvakakuvadza huwandu pane dzakawanda varidzi vewebsite trafikin mumkore maviri apfuura. Mharidzo yakabva kuGoogle yakanga yakajeka: Mira kuzama günyengedza yedu yekutsvaga mhinduro. İki matema-şap maitiro ayo vazhinji vanonzi "SEO Varidzi" vanga vachishandisa kwemakore akange asisiri kushanda.
Vakawanda vebhizimisi vaisatomboziva kuti SEO yavo yekudyisa vashandisi vakanga vachishandisa mazano ekusavhiringidza kukurudzira mawebsite avo, saxa vakavhunduka kuona kupavka kwwvo kwegwagwa kusvika pasi (ndogzono kongofa kongofa kongfav.) Makambani akange awedzera webhusaiti yekutengesa kwemakore achishandisa zvinyorwa zvisingabatsiri izvo zvakange zvakasungwa nemashoko makuru, kubatanidza pulhomba, nekubatanidza mavhiri akagadzirirwa kunyengera Google.
Google yakayambira varidzi vewebhusaiti kuti vatarise zvakanaka zvemukati uye varege kuedza kushandisa mhedzisiro yavo, zvisinei hazvo munhu wese akange atiza neiyi mitema yeti-hat zvemakore saka nyevero dzakanyanya dzakawira munzevei. Nekuda kweizvi, vazhinji varidzi vewebhusaiti havana kugadzirira shanduko yakaunzwa neGoogle, vechigadzira izvo zvingangonzi "njodzi isingafambidzwe" kavari. Hwemabhizinesi avo ese emhando yepamusoro kunyengedza injini dzekutsvaga.
1 Kuparara kweMurima Təsərrüfatları
Kuparara kweMurima Təsərrüfatları
Tsvaga Mühərrikin Torpaq Redaktoru Baş redaktoru Matt McGee’nin yeni istifadəsi mümkün deyil "Google Panda Makore’yı gözdən keçirtmək: Nzvimbo Uye SEO Kuonekwa İzvo Chaizvo Təsiri".
Nyaya yacho yakaratidza kuti mamwe mawebhusayithi makuru akange akabatwa sei. HubPages, MaMahalo uye Suite101 ilə tanış olmaq.
Kuwira mumugwagwa wavakaona kwaishamisa. HubPages 62% şoma şomanana kupfuura və yawanga ispan yatanga güc kwePanda. Mahalo akarasikirwa ne92% yemugwagwa wayo uye Suite101 yakarasikirwa neA96%. Sevashandi sezvinoona mawebsite aya, havana kumbova chinhu chinopfuura kukudzwa zvinyorwa təsərrüfatları izvo zvakanyatsorongedzerwa kukurudzira vashanyi kuti vanyanise pazvibatanidzwa.
Zvakanga zvichishandiswa nevanhu vazhinji kuti vatsigire mawebsite mavo matsva sezvinyorwa zvakawana SəhifəRank zvakanaka nokukurumidza. Saka zvakanga zvakajairika güne SEO kambani yumukanda imwe nyaya pamusoro peHubPages kana Squidoo eve quisa hukama hwakawanda güne mawebsite mazvo.
Aya makambani aigara achikoshesa huwandu hwehutano (kutarisa zvakatarisa chero chinhu chipi nechipi pamusoro pekupedzisira mupurazi. Izvo zvakaitika kuti mawebsite aya akabudirira, asi pakuguma, ndizvo zvaivawo zvakavadzosa pasi pasi.
Ndakaona mawendekiti mashomanana asingabatsiri ayo ane ini kuona mazhenje emigwagwa mushure mekudzokorora kwePanda, zvisinei nepamusoro pehhodhi, ndakanga ndisingabvumirwi nechekuchinja ikoko sezvandakanga ndaara ndichiguurusha pira.
Shamwari dzangu dzakanga dzisingabatsiri. Böyük Britaniyanın veb saytlarını bütövlükdə böyütmək və ya birdəfəlik istifadə etmək üçün bir həftə ərzində iki dəfə yaxınlaşmaq üçün baza ilə PRP zvinyorwa zvakadai se Linkvana ilə BuildMyRank.com (Google zvachose 2012) təsdiqlənməmişdir. Yaiva iri nyore webhusaiti asi yakaita mari yakawanda kubva kumazana mashomanana kushanyira pazuva. Ndinotenda 100.000 $ (bir dollarlıq pul) Flippa pulunu almaq.
Mushure mekuvandudza panda, yakanga isingabatsiri, içivapa davamlızidzo chine hakasha pamusoro pekuti nei istifadə edərək istifadə edin. Pane yakanaka çinyorva, müxtəlif dəyişikliklər üçün zvakare kuvaka webhusaiti nekunyora zvinyorwa zvemhando yepamusoro zvevashanyi. Zvinonyadzisa kuti havana kuita izvi kubva pakutanga.
Sezvo iwe webhudziri webhusaiti, ini handina kubatwa zvakananga nekushandurwa kwePanda, asi gücin kwakagadzirisa nzvimbo yangu semunyori wekuzvipira. Zvizhinji zvevabhenji vepawebhandi vakange vandibata nemakore akawanda ndichikumbira kuti ndivanyorere ivo. Vakakurumidza kubvisa basa ravo rekushanda pandakavarayira kuti handinganyori zvinyorwa zvemashoko e500 zve $ 5- $ 10. Mupfungwa dzavo, nyaya dzose dzakasikwa zvakaenzana. Chinhu choga chavainetseka nacho ndechekuti nyaya yaiva yakasiyana. Unhu hweiyo nyaya yakanga isingakoshi. Hazvishamisi kuti vazhinji vevanhu ava vakashandurwa kuva nyaya yekufuratira panzvimbo.
Saka iwe haudi toni yezvibatanidza. Usaendere gune huwandu. Enda gune mhando. – Neil Patel
Mazuva ano, kana mukwikwidzi ane chiuru chezana kana gumi zvuru zana kana mazana ehungano eve iwe unongova nezana chete, iwe unogona gunge uchitarisa ivo kana hutano hwako huri nani, uye uri kukura muhupenyu kwenguva. Saka, kutengesa kunonoka kudarika pane kuwana chiuru chekubatanidza zuva rimwe nerimwe kana vhiki shomanana kana. Zvakafanana nokuwana zvishoma zvesungo kana uri kuedza kuenzanisa "chikafu chekudya", iwe unonyanya kushamwaridzana, unhu hwekuchenjera, mumwe munhu anenge atova ne "mbwa yekudya" mune zvuru zvepamusoro, kana kwete mazana zana. Tsvaga mapeji iwayo, uvaise pasi, edza kuwana hakama, chaiko?
Uye pamusoro peiyo, unoda kuve nechokwadi kuti magwaro anchor akasiyana-siyana. Iwe hausi kuda kungova ne "chikafu chekudya" sevamwe vose, nokuti kana iri yose "chikafu chekudya", hazvisi zvisikwa. Inofanirwa kuenderedzwa kumusoro, iine mazwi makuru mairi, içitarisa seyakasikwa kubva kune zita remudunhu, kusvika kumusoro wepeji we peji, kana kuti izwi rechikwereti, mamwe mazwi akasiyana-siyana anovirirena nevoiravia nakokado.
Asi iyo ndiyo nzira huru iyo ini ndaizovaka hukama. Zvinononoka uye zvakasimba zvinokunda munhangemutange. Enda gune unhu uye usaenda kunomhanya, kurudyi? Uye usaedza gündə bir dəfə istifadə etməyiniz üçün zviuru zvezvibatanidza kana iwatombofaniri kutenga chero hakama. Kana iwe ukangonyora zvakanyatsonaka zvakanaka, chibereko chakanaka kana basa, unogona kuwana zvikwereti zvakakurumidza uye zviri nani kudarika vanhu vazhinji müxtəlif günze uko vari kushandisa zviuru zvemadhora pazuva pamahomiti..
SEO mazano munguva yakapfuura akavimba pane zvakawanda zvekunze zvinhu. Chigumo chako chakanga chiri mumaoko emajini ekutsvaga uye gücinja muhurongwa hwavo hwemaitiro kazhinji zvaireva kuti webhusaiti yako yepamusika yaizodonha. Migwagwa yakagadzirwa nokuwedzera zvinhu kune mamwe mawebsite ane zviyero zvakare kune iwe pachako. Zvinosuruvarisa, izvi zvaive nguva dzose gücinetsa kuwedzera kukosha kune vebhusaiti yako, ev quwedzera kukosha kune vebhusaiti yako kunofanira günge və ya çinangwa chako chikuru. Chero nzira ipi inotarisa kuti ishandise migumisiro yekutsvaga inguva yekugadzirisa kwenguva pfupi dambudziko remakore refu. Tsvaga injini haichazove neine matambudziko nemawebsite anotumira zvakanaka zviri mukati.
Chinyorwa changu chepakutanga chechinyorwa içi chakanga çiri "Kanganwa Pamusoro Pokuvaka Sangano və Tanga Kunyora Zvakanaka Zviri Mukati". Ndakasarudza kusashandisa chirevo ichocho hissvo ndaiona kuti zvishoma zvinotsausa. Bina binası ichiri kukosha. Mitemo yakashanduka, günyange içiri chikamu chinokosha cheSEO puzzle.
Saka zvakakosha kuti usakanganwa nezvekuvakwa kwekubatana, asi ndinonyatsotenda kuti chinonyanya kukoshesa paIndaneti chinofanira günge chiri kuumba yakakwirira yehutano. Zvakanaka zvinowanikwa mumoyo wekugadzira mazano.
SEO Moz Başlayıcısının SEO təlimatı:
Mən unofanira kukurumidza kuona kuti imwe neimwe yeiyi kusimbisa maitiro ekuvaka inotsamira pawebhusaiti yako kuva nezvakanaka zvemukati. Kana iwe ukasashambadzira zvakanaka zvemukati, hapana munhu anozokubatanidza yenidir, hapana munhu ari kuzogovera zvinyorwa zvako, uye hapana dhairekitori ya kuzogamuchira webhusaiti yako. 2013-cü ildə, bağlantı bağlantısını bağlayıram və nekupa vashanyi ruzivo rakakosha. Mazuva ezvigadzirwa zvekukosha zvapera. Rangarira, mhando pamusoro pehuwandu.
Veb Hosting Gizli İnkişaf Etmək üçün İnternet saytları açılır. Inoburitsa zvinyorwa zvitatu kana zvina mwedzi woga woga, zvisinei hapana doldurucu. Chinyorwa chimwe nechimwe chinowanzo zviuru zvemashoko masoma pakureba, inotsigirwa neyekutanga danho rekutsvagisa, ya yakanyorwa pamwe nemuverengi mupfungwa.
Munguva pfupi, tələsik hwomuridzi weWSSR Jerry Low ndokwekugovana zvikamu uye kushamwaridzana kunowanikwa güne imwe neimwe nyaya. Izvi hazvizove zvakanyanya kuoma kuita sezvese zvose zviri pano zviri zvakanaka zvakakwana kuti zvive nehutano uye zvikamu zvikamu. Nenguva refu, ivhu rehutano huri pamusoro peHWSR huchaenderera mberi kukura, kuve nechokwadi kuti nzvimbo yacho inogadzira zvakawanda zvemigwagwa kubva kuzvinjini.
Nhamba dzepaIndaneti dzinogara dzichitaura nezvemaseriki zvakadai sehuwandu hwemagariro evanhu, maonero epamapeji eve kushanya kunoshamisa. Tinoshandisa mazwi aya kakawanda zvokuti zviri nyore kukanganwa kuti kushanya kwega kwega kunomiririra munhu; munhu ari kugara aververenga webhusaiti yako kubva pamakombiyuta, planşet kana smartfonu.
Paunoverenga chinyorwa pa internet, hanya bura yaxsi yaxwanda sei retweets kana ine vangani vangani inayo paFacebook? Ehe haudi. İzvo zvese zvakakosha ndezvekuti chinyorwa chinobatsira kwauri neimwe nzira; kugadzirisa dambudziko kana kukuvaraidza neimwe nzira.
Ramba uchifunga izvi paunenge uchinyorera nyaya dzako. Kana iwe uchida kuti nyaya igoverwe eve iyanane güne mamwe mawebsite, nyora zvinyorwa zvako kuvanhu, kveete tsvakurudzo.
Pakupedzisira, munhu munhu anosarudza kana zviri mukati mako zvakanaka uye kuti vanozvigovera nevamwe vanhu. Uye kana vanhu vachibatanidza uye vachigovera zvauri kuverenga, injini dzakadai seGoogle dzichaona kuti sechiratidza kuti nyaya yako ndeyehupamhi hwepamusoro uye inotarisa peji yako yakakwirira mumigumisiro yavo nekuda kweiz.
Saka mazano və kwauri ndeokuti:
Nyora kuvanhu, kveete yevanjini.
Iva nemwoyo murefu. Apo zvinosvika pakubatanidza çivakva, zvishoma nezvishoma uye zvakasimba zvinokunda munhangemutange.
Paunosangana nevanhu kuti vakumbire zvikamu uye mazano, ivai nehanya, unyanzvi eve unoremekedza; kunyange kana vasingabatanidzi kumashure. Mən hauzombozivi, vangangosangana nenguva inotevera.
Pfungwa yako yekutanga inofanira günə iri günyora zvakanaka zviri mukati. Pasina zvakanaka zvakagadzikana, haugoni kuunza mazamu anouya uye kugoverana zvakanaka.
Ndinotarisira kuti unonakidzwa nekuverenga nyaya ino. Ndinogara ndichifarira kunzwa nezvemasarudzo evanoshandisa webhusaiti anoshandisa kuvaka gwara rekutsvaga, nizvozvo ndinokukurudzira kuti usiye mhinduro uye ugovera maonero ako panyaya yacho.
Penguins, Pandas nedzimwe mhuka dzesango zvakakuvadza huwandu pane dzakawanda varidzi vewebsite trafiku mumakore maviri